Kubathandi iholide elikhanyayo, esebenzayo futhi ezithakazelisayo Orenburg has a ukuzilibazisa isikhungo emangalisayo okuthiwa "Extreme Park". Isebenza unyaka wonke, ngakho-ke ungakwazi ukugubha May Day, e hot sezulu ukubhukuda umfula Ural, futhi ebusika ungakwazi ukugubha uNcibijane nezinye amaholide. Maphakathi lokuzijabulisa ikhefi olukhulu yokudlela lapho ungakwazi oda idili.
It has konke ezidingekayo kuze kube iholidi ngaphambi elikhanyayo nabangani, osebenza nabo noma umndeni wonke. Nampa:
izinhlobo ezimbili zemibukiso: CROSSBOW futhi emoyeni;
Lena akuyona uhlu oluphelele yini yakhiwa "Extreme Park" (Orenburg). Kumele wazi ukuthi kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesine ugibele epaki awasebenzi, kulezi zinsuku ungavakashela ikhefi kuphela, ukuqasha indlu, okugeza.
Ebusika inikeza inkonzo ski sokuqasha, skates, sleds nezinye izinto ebusika.
Izindlu: Inani Nemibandela
Esikhungweni ukuzilibazisa "Extreme Park" (Orenburg), kukhona amakilasi eziningana "Umnotho" izindlu, "Standard", "ehhotela". Bonke babe amanani ahlukene nemibandela ngaphakathi izindlu.
Umnotho 4 (2 amakamelo). Zonke izindlu kulesi sigaba zifaka: imibhede 4, i-TV, efrijini, embhedeni amashidi, amabhentshi ngaphansi kwendlu, amanzi, BBQ, ebusika kukhona Ukushisa, yangasese emgwaqweni. Kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesine ukubaluleka indlu ruble 2000, ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo, ngeSonto - ruble 3500.
Standard for 6 abantu (3 rooms). Endlini kukhona zonke izinto ezindlini ikilasi "umnotho" + eshaweni, yangasese, kagesi, umshini ongenisa umoya. Izindleko izinsuku avamile - ruble 5000, ku-nangezimpelasonto kanye namaholidi - ruble 6000.
Standard ehhotela abantu 3. Ikamelo has a embhedeni abantu ababili plus noyedwa nesibaya ukuphuma, i-TV, eshaweni, yangasese, abenzi air conditioner.
Indlu iqembu elikhulu labantu abangu-10. Ingabe ikhona enye into endlini ejwayelekile, kodwa ngaphezu kwalokho ihlinzeka kombhede inkampani enkulu, futhi 4 amatafula. Lokhu kusho ukuthi lonke "Extreme Park" e Orenburg kungaba izinkampani kokubili elincane lelikhulu.
Intengo ukuze iqashwe arbors isukela 800 ruble 8000.
Ingqalasizinda ukuzilibazisa isikhungo
On the indawo lapho ikhokhelwa yokupaka, kubiza ruble 150. Uma kungekho isifiso ukukhokhela yokupaka, ungakwazi ushiye ngaphandle ukuzilibazisa mahhala. "Extreme Park" (Orenburg) inikeza ithuba ukuqasha ibhayisikili, giroskuterov futhi ezinye izindlela zezokuthutha ukuze ukunyakaza base.
Futhi lapha ibiyelwe lolwandle, ukuba ayilime, ayigcine, ihlanzekile kakhulu. Kubalulekile ukuphawula ukuthi kuleli qophelo p. Ufa net, futhi kungenza ukubhukuda ngaphandle kokwesaba empilweni yazo. Ngokuvamile, "Extreme Park" (Orenburg) inakekelwa kahle kakhulu futhi ihlanzekile, kukhona nobungane nobuchwepheshe bale abasebenzi. Ensimini ka inqwaba ukubaza sokhuni, eduze kwabo ungachitha i photo shoot ezithakazelisayo.
Kukhona indawo yokudlela, bar cafe ongaphandle nge esiteji enkulu. Ngo amanzi kukhona eziningi ezihlukahlukene zokuzijabulisa ukuthi wayezithanda izingane nje kuphela kodwa futhi abadala. Kungenzeka ukuba ukubhuka ekotishi noma Gazebo ocingweni.
Enye yezindawo ezihamba phambili esifundeni, zibonisa ukuzwakala kakhulu futhi service enhle - kule ndawo ibizwa ngokuthi "Extreme Park" (Orenburg). Kanjani ukuze uthole kule ndawo, hhayi wonke umuntu uyazi. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo ukuzilibazisa itholakala 23 km ukusuka edolobheni Orenburg, eduze nedolobhana Nezhinka, esemgwaqweni enyakatho yedolobha.
Kukhona ukukhetha enkulu izindlu ezahlukene izimo ezahlukene, amanani kanye umthamo. Ngo kwepaki inakekelwa kahle futhi ebhishi yangasese ehlobo, ungakwazi ukujabulela cwilisa in emfuleni. Ufa. Ebusika, siqiwu futhi ukusebenza, futhi lapha ungakwazi ukuqasha cishe kunoma iyiphi into ezidingekayo ukuze ukuzilibazisa ebusika elikhanyayo.
"Bykhanov Garden" - omunye amapaki endala Lipetsk
Istra Reservoir - Pearl eMoscow
Ngaphandle kwenkokhelo ikhefu
Party in Ibiza - kwalibaleka
Lona kanye Vitebsk kuphela Station
Lokho aphathe nebhere Bile? Izakhiwo kanye isicelo lwebhere Bile
Uboya - ethathwa imvu uvolo ikhava
Kraft "Terraria": ngokudala izinto ewusizo
Ivan Alekseevich Bunin: ukuhlaziywa inkondlo "Inja"
Yiluphi ulimi olukhulunywa eMexico, abantu bendawo?
Iholide Fabulous e Dubai - exoticism Oriental nobuchwepheshe besimanje.
Zabesilisa lolwandle izikhindi.
Tax on yengeniso
Indlela abelethe amawele: amathiphu, imithetho.